Tsy afaka manova Radio (NAV1) amin'ny Air France Airbus 380
fanontaniana Tsy afaka manova Radio (NAV1) amin'ny Air France Airbus 380
1 taona 11 volana lasa izay #442 by spilok
Niezaka aho ny zava-drehetra, fa tsy afaka manova ny onjam-peo (NAV1) matetika amin'ny Air France Airbus 380. Tiako ny fiaramanidina saingy tsy misy ilana azy ny ahy, raha tsy afaka manova ny onjam-peo peo.
Inona ny zava-miafina? Mba ampio.
1 taona 11 volana lasa izay #443 by Dariussssss
Same eto ... Raha ny marina, PA A380s rehetra manana izany olana.
Angamba, raha toa ka misy ny fomba hanoloana ny onjam-peo, na na inona na inona izany, ny iray avy any Boeing izay hanampy, nefa aza mieritreritra izany azo atao. Tadidiko, in FS2004 izay azo atao.
1 taona 11 volana lasa izay #444 by Dariussssss
Afaka manamboatra izany. Rehetra ilainao dia ny toerana misy anao A321.
Mankanesa any A321,
misokatra Panel lahatahiry,
hitady ary manokatra panel.cfg rakitra,
handika ireo andalana:
(Fotsiny ny miloko ireo), Tsy azo adika fa Window01, dia afaka ny A380 Sokiro ny tontonana.
Mandehana ny A380,
Panel.cfg rakitra misokatra,
hitady ary hisolo ny andalana rehetra ao amin'ny Radio.
Notsapaina minitra vitsy ho Mandehana, ka nanao fipetrahana tsara tarehy.
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: spilok, Gh0stRider203, geniousabhishe1
1 taona 11 volana lasa izay #445 by Gh0stRider203
Tsy maintsy tsy nahazo ny fanamarihana dia naniraka tany ....
Radio amin'ny Airbus dia ho voatery atao endri-javatra. Kinda toy ny blinkers amin'ny BMW
1 taona 11 volana lasa izay #446 by Dariussssss
Fotoana mamorona pejy: 0.272 segondra